'एमालेलाई भोट दिए कुलमान हट्छन्, फेरी हुन्छ लोडसेडिङ' - Everest Dainik - News from Nepal
धेरैको मनमा एमालेको सरकार आए कुलमान हट्ने चिन्ता देखिन्छ
चुनावका लागि उम्मेदवारको छनौट भइरहेको बेला त्रिभुवनबस्तीकी राधिकालाई झन चिन्ता थपिएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै सूर्यमा भोट हाल्दै आइन उनी । “छिमेकीहरु पनि एमाले, आफूलाई राजनीति थाहा नभएपनि लालबहादुर र ज्ञवाली सरको कुरा मन पराएर सूर्यमा भोट दिए अहिलेसम्म” राधिका भन्छिन्, “यसपालि भने दोधारमा पो परेँ”
राधिकाको एक मनले भन्छ, एमालेलाई भोट दिम सधै. जस्तो । तर अर्को मनले मान्दैन । उनले सम्झिन्छिन् छोरीको परीक्षाको बेला काठमाडौं बसाईको दुख । राजधानीको एउटा क्याम्पसमा व्यवस्थापन दोश्रो वर्षको परीक्षा दिँदै गर्दा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा छोरी रोएको सम्झिन्छिन उनी । अहिले त्यही छोरी बिबिएसको परीक्षा दिइरहेछे । “त्यो बेला बत्ती नभएर मैनबत्तीमा परीक्षाको तयारी गर्नु परेको थियो छोरीलाई, कति दिन त चिन्ता मानेर रोई पनि । अहिले चौथो वर्षको परीक्षा चलिरहेको छ उसको । कति खुशी होली बत्ती नगएर” राधिकाले भनिन् ।
मनको यही धरमरमा उनलाई लाग्छ, कतै एमालेलाई भोट दिए फेरी लोडसेडिङ हुने त होइन ? त्यति बढी बुझ्ने नभएपनि उनलाई कुलमानको नाम थाहा छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि दिएका केही निर्देशन उनले सुनेकी छिन् । अस्ति मात्रै पुनरवासमा भारतीय प्रहरी आएर नेपाली युवाको हत्या गरेको घटनामा पनि स्थानीय माओवादी नेताले खेलेको भूमिकाले उनी प्रभावित बनेकी छिन् ।
याे पनि पढ्नुस दश गजावारी भारतीय सीमा सुरक्षा बलको हस्तक्षेप, कञ्चनपुरको पुनर्वासमा तनाव
“हिजो एमालेका तर्फबाट राधा ज्ञवाली बिजुली मन्त्री थिइन रे, उनले त कुलमानलाई कता कता पठाएकी हुन रे काम गर्न सक्दैन भनेर । तर प्रचण्डले कुलमानलाई ल्याएपछि चमत्कारै गरे तिनले”
राधिकाको परिवारमा एमाले नेता लाल बहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार ज्ञवाली, तारा लामा तामाङहरुको बाक्लै आउजाउ हुने गथ्र्यो कुनै बेला । यही भएर उनको मनमा सूर्य चिन्हको छाप पर्यो । तर अहिले आएर भने उनलाई डर छ, कुलमानका कारण बिजुली आएको हुनाले एमाले सरकारमा गएपछि कुलमानलाई हटाएपछि फेरी उस्तै पो हुने हो कि भन्ने ?
केही दिन अघि त्रिभुवनबस्ती बजार गएको बेला एउटा सानो रेष्टुरेन्टका गफ सम्झिन्छिन उनी, “हिजो एमालेका तर्फबाट राधा ज्ञवाली बिजुली मन्त्री थिइन रे, उनले त कुलमानलाई कता कता पठाएकी हुन रे काम गर्न सक्दैन भनेर । तर प्रचण्डले कुलमानलाई ल्याएपछि चमत्कारै गरे तिनले” माओवादी युवाहरुको यो कुराले उनी कुलमानसँग पनि औधी प्रभावित बनेकी छिन् ।
याे पनि पढ्नुस बिहे गर्न नमानेपछि कञ्चनपुरमा युवतीमाथि निर्घात कुटपिट
के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा राधिका खुलेर जवाफ भने दिन सक्दिनन् । “घरकाले माने त माओवादीलाई नै भोट दिन्थे, अब हाम्रा लागि केही भएको भनेको यै सरकारको पालामा हो ।” राधिकाले भनिन् । प्रचण्ड सरकारले अरु के के गर्यो भन्ने कुरामा बढी जानकारी नभएपनि लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि सबै नेपालीलाई फाइदा पुगेको उनले बताईन । राधिकाको परिवार नै एमाले हो । त्यसैले उनलाई परिवारको डर पनि छ कता कता । खुलेर माओवादीको कुरा गर्न सक्दिनन् उनी ।
“मेरो घरमा चैं नभन्नु होला नि फेरी, मलाई हकार्छन्” हाँस्दै उनले भनिन ।
त्रिभुवनबस्ती, पुनर्वास, बेलौरी, लक्ष्मिपुर, रामपुर, बाइसेबिचवादेखि पर बेल्डाँडीसम्म राधिकाको जस्ता मनस्थिति बोक्ने धेरै महिला भएको उनले बताईन । “मलाई मात्रै होइन यो दोधार परेको । अस्ति नै कृषिको तालिममा जाँदा अरु गाविसका महिलाहरुको कुरा पनि यस्तै थियो । लोडसेडिङ नहोस् भन्नका खातिर मात्रै पनि माओवादीलाई जिताऔं भन्ने कुरा चल्यो । घरमा बरु अरुलाई नै दिने भन्ने तर चुनाव केन्द्रमा गएर माओवादीको हँसिया हथौडामा छाप हान्ने पनि भने केहीले ।” ” उनले भनिन् ।
यसअघि दोश्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका देवानसिंहले जितेको क्षेत्र हो राधिकाको । त्यतिबेला माओवादी नेतृ बिना मगर चुनावमा उठेकी थिइन । तर थोरै मतले उनी पराजित बनिन् । कांग्रेसका सांसदले उक्त क्षेत्रमा खासै काम नगरेपछि पनि महिलाहरुले माओवादीलाई नै रोज्न सक्ने राधिका बताउँछिन् । “सांसद भन्दा बढी काम बिनाले नै गरेको सुनिन्छ । परासनदेखि त्रिभुवनबस्ती र बेल्डाँडीसम्म धेरै काम गरेकी छिन् तिनले, एकपटक तिनलाई नै मौका दिने कि भन्ने पनि तालिमको साँझ बसेको बेला केही दिदीहरुले भने । “मेरो घरमा चैं नभन्नु होला नि फेरी, मलाई हकार्छन्” हाँस्दै उनले भनिन ।
भनेपछि माओवादीलाई नै जान्छ हैन त तपाईको भोट ? कुराकानीको बिट मार्दै सोधे मैले ।
उनी हाँसिन मात्र ।
लाग्छ, राधिका जस्तै कतिपयको मनमा यही छ– “एमालेलाई भोट दिए कुलमान हट्छन्, फेरी हुन्छ लोडसेडिङ”
ट्याग्स: kanchanpur, Local body election 2017